Semalt: Iyintoni inkcazo ye-malware?
Ngokutsho kukaJulia Vashneva, umphathi we-8 (Semalt oyiNtloko kuMphathi weMatriki, i-malware yintsimi ebanzi yezixhobo ezininzi ezinobungozi nezilimazayo. Ingagcinwanga kwaye ingabonakali, iyaqhubeka ngokubhekiselele kwi-PC yakho. Abaqhetseba basebenzise i-malware ukuze bafumane imali kwiirekhodi zakho kunye nokunyusa ukukhwabanisa.
Yiyiphi iteksi eyenziwa yi-malware ukuba ifike kwi-PC yakho?
I-Malware ihlala ihlanganiswa kwi-shareware okanye iifowuni ozikhuphelayo kwiwebhu. Xa uya kwisayithi, ufumana intshukumo ebonisa ukuba ifumene isifo kwi-PC yakho. Unokuqalisa isilingo samahhala somseshini wokusuleleka okanye usebenze ukutshabalalisa kwi-PC yakho.
Ufumana isicatshulwa kumntu owaziyo ngokusebenzisa intengiso ye-intanethi ukuba kukho iifoto zale mntu kwiwebhu, kubandakanywa uxhumano kwiifoto. Ukuba uthepha uqhagamshelo, i-PC yakho ibonakele nge-malware.
Iyiphi indlela yokusebenza yolwaphulo-mthetho?
Impembelelo yokusetyenziswa kwezicelo zakho, i-malware ichaphazela ukusetyenziswa kwezicelo zakho kwi-PC yakho. Oku kufanele kwenzeke kwizakhiwo ezahlukeneyo:
Xa ufika kwisayithi yebhanki yakho kukho indawo yokuba ungaphambukiswa kwisayithi ye-phony.
Nangona usebenzisa i-web based banking, ufumana i-fly fly up, ngokukhawuleza ucela ukuba unikezele iinkcukacha ezithile kwaye ufake ifayili yedijithali.
Ukusebenzisa i-spyware ukufumana idatha
Nangona ugqirha, i-spyware ihlola amaxwebhu kwisitoreji sakho, izisa ezinye i-spyware, ithathe indawo yephepha lakho lokungena kwewebhu, njalo njalo. Ngokuhlolisisa inxalenye enkulu yemisebenzi yakho, i-spyware iyakwazi ukuskena iphinde ithumele idatha yakho ekwahlukileyo kwizaphulo-mthetho.
Khusela i-PC yakho
Qhubeka ukhumbula iingcebiso ezilandelayo xa wenza izitofu kwiwebhu:
Hlalani nilindile ukuba ukuhlaziywa kweyona ndlela yakutshanje yesikhokelo sakho sokusebenza kuye kwafakwa kwi-PC yakho. Isikhokelo sokwenza i-PC yakho sinokucwangciswa ukuba ufake ii-updates ezikufutshane kunye nokuzizisa ngokukhawuleza.
Qinisekisa ukuba inqanaba lokhuseleko lwesicelo sakho sokukhangela sisetyenziswe ngokukhawuleza.
Ukuba kwenzeka ukuba usebenza kude, qi niseka ukuba umbutho ukhuselekile (umzekelo, ngokusebenzisa igama elifihlakeleyo.)
Nangona kukho iinzame ezifanelekileyo zokukhusela kwi-PC yakho, kubaluleke ngakumbi ukuba uqikelele ngokucokisekileyo xa usebenzisa imali yebhanki yewebhu kwaye ngakumbi xa ubhala ngokuchanekileyo ukutshintshiselana kwakho.
Ngokomzekelo, kubalulekile ukuba wenze oku:
Yenza kuphela isayinwa yedijithali kwintsebenziswano ocingayo okanye ozicelileyo.
Sebenzisa uphawu oluphambili lwegama ngalinye okanye utshintshiselwano.
Ngokufanayo, qaphela xa usebenzisa i-web kunye ne-imeyile.
Kuphela iziza ezivakalayo ezivulekile kwaye ungalokothi ulande nayiphi na irekhodi okanye izicelo kwiindawo ezingabonakaliyo okanye ezixakekayo.
Ukungahoyi ugaxekile kunye nomyalezo osolisayo.
Musa ukuxhuma intonga yakho ye-USB kuphela kwiphina i-PC Source .